Mahajanga: Akon’ny fankalazana nasionaly ny 8 marsa
samedi, 09 mars 2019 23:09
Teto Mahajanga no ivon'ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena hankalazana ny zon'ny Vehivavy ny 8 marsa 2019 tao anatin’ny lohahevitra "Ny adidy sy andraikitrin'ny vehivavy ho fampandrasoana ny firenena" tamin'ity taona ity.
Solon-tenan'ny fikambanam-behivavy avy amin'ny faritra roa amby roapolo eran'i Madagasikara no tonga nandray anjara tamin'ny "carnaval" izay natao tao amin'ny kianja Rabemananjara, natrehan’i Mialy Rajoelina, vadin'ny filoham-pirenena, notronin’ireo vehivavy minisitra sy ireo vehivavy vadin'ireo mpikambana ao amin'ny governemanta sy andrim-panjakana isan-tsokajiny ary ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena.
"Mpiantsehatra mavitrika amin'ny fiaraha-monina ny vehivavy, ary manana zo sy andraikitra amin'ny maha olom-pirenena azy izy, izay tsy misy maha samihafa azy amin'ny lehilahy" hoy i Mialy Rajoelina. Miantso ny vehivavy malagasy rehetra ny tenany mba tsy hisara-bazana, fa hifampitsinjo sy hiray hina ka hitondra fiovana ary hitondra ny vehivavy amin'ny toerana tokony hisy azy.
Notokanana nandritra iny lanonam-pankalazana ny 8 martsa iny koa ny tranombarotra "Malagasy Ethanol" voalohany eto Mahajanga, izay tetikasan'ny vadin'ny filoham-pirenena, amin'ny alalan'ny fikambanana FITIA, hiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampiasana angovo madio ao amin'ny tokantrano malagasy.
Nanamarika io andro io koa ny fijoroana vavolombelona nataona vehivavy dimy nandritra ny valan-dresaka "Viavy mahavita azy". Nitantara ireo herisetra sy sedra nihatra taminy ary ny lalana nizorany mba hihoitra teo amin'ny fiainany ireo vehivavy ireo.
Vehivavy 36 kosa no nanolotra tetikasa fihariana sy fampandrosoana manerana ny Faritra 22, ary 9 amin'ireo no voasafidy nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana FITIA sy ny Ministeran'ny mponina, ny fiahiana ara-sosialy ary fampivoarana ny vehivavy mba hanatanterahana ny tetikasan'izy ireo.
Nilaza i Mialy Rajoelina fa manameloka ireo herisetra amin'ny endriny isan-karazany izay mihatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy. "Mijoro aho anio, sy amin’ny andro mbola ho avy hiaro ny ankizy sy ny vehivavy malagasy amin’ny herisetra, ary hiaro ny zon’izy ireo. Manainga ny rehetra aho handray anjara fitenenana ka hiampanga ny zava-misy, ary miangavy ny manam-pahefana hanasazy ny endrika herisetra rehetra mihatra amin’ny vehivavy sy ny ankizy" hoy izy.
Nampirisika hatrany ireo vehivavy malagasy i Mialy Rajoelina hanangana tetikasa hampivoarana ny vehivavy, ary nanao antso avo ny Malagasy rehetra hiampanga sy hanameloka, hifarimbona, hanaitra, hampahafantatra ny rehetra satria tokony arovana ny vehivavy sy ny ankizy.